News Collection: म १६ वर्षीया युवती हुँ। मलाई यौनसम्पर्कले सताउँछ। के गर्ने ?
म १६ वर्षीया युवती हुँ। मलाई यौनसम्पर्कले सताउँछ। के गर्ने ?
यौन सम्पर्कले सताउँछ भनेको के हो ?
तपाईंले आफ्नो सन्देशमा यौनसम्पर्कले सताउँछ भनेर लेख्नुभएको छ। यसको चाहना बढी भएर पनि सो चाहना पूरा गर्न नसक्नुभएका कारणले सताएको भन्नुभएको हो कि यौनसम्पर्क नै धेरै गर्नुभएका कारणले सताएको हो ? म तपाईंले चाहना पूरा गर्न नपाउनुभएको कारणले सताएको भन्ने मानेर कुराकानी गर्दैछु। त्यसका लागि सर्वप्रथम यौनचाहना किन हुन्छ बुझौं।
यौन चाहना किन हुन्छ र यसलाई कसरी पूरा गर्ने ?
यौन मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसैले यौनेच्छा हुनु, यौनका कुरा सुन्दा उत्तेजित हुनु एकदम स्वाभाविक हो। भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि आवश्यक कुरा हो, मानव जीवनका लागि प्रकुतिले नै दिएको। सामान्य भाषामा भन्दा यौनसम्पर्क राख्ने वा यौन तनाव शान्त पार्ने इच्छालाई नै यौनेच्छा भन्न सकिन्छ। परिभाषामा केही फरक मत भए पनि यौनेच्छा वा यौन व्यग्रता एउटा मानसिक तथा भावनात्मक जैविक व्यग्रतासँग सम्बन्धित स्वाभाविक शक्ति हो। यो प्राकृतिक शक्ति वा व्यग्रताले निश्चित कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्छ। यसलाई हाम्रो मस्तिष्कले सञ्चालन गर्छ। मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणाली सक्रिय देखिन्छन्। एक त endocrine system (इन्डोक्राइन सिस्टम) अन्तर्गतका रागरसहरूले त्यसको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्दि्रय प्रणालीका अनि मस्तिष्कले। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यौन उत्तेजनालाई स्नायु प्रणाली तथा यौनअङ्ग संलग्न एउटा जटिल प्रक्रियाको कि्रयाशिलता हो भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ।
यौन चाहना स्वाभाविक कुरा भएकाले यसलाई दबाउनु आवश्यक छैन। यौनेच्छा शान्त पार्ने उपायहरूमध्ये सबैजसोका लागि यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख हो। यौनसम्पर्क गर्दा यौन अङ्गहरू एक-आपसमा घर्षण गराइन्छ भने हस्तमैथुन गर्दा हातले वा अन्य तरिकाबाट नै आफ्नो यौन अङ्गको घर्षण गराएर वा दबाब दिए यौन आनन्द तथा यौन चरमसुख प्राप्त गरिन्छ। तपाईं यदि अविवाहित हुनुहुन्छ भने व्यक्तिसँगको यौनसम्पर्क गर्न त्यति सजिलो नहुने मात्र होइन, त्यसका अन्य नकारात्मक असर पनि हुन सक्छन्। तपाईंका लागि यौनचाहना शान्त पार्न हस्तमैथुन राम्रो विकल्प हो।
पुरुष तथा महिला दुवैले हस्तमैथुन गर्छन् तर पुरुषको तुलनामा महिलाहरूले केही कम गर्ने भए पनि उनीहरूको हस्तमैथुन गर्ने तरिकामा विविधता बढी हुन्छ। महिलाहरूले विभिन्न यौनअङ्गलाई प्रयोगमा ल्याई हस्तमैथुन गर्ने देखिएको छ। हस्तमैथुन गर्दा यौन परिकल्पना महत्वपूर्ण पक्ष हो। हस्तमैथुन गर्दा आफूले चाहेअनुरूप यौन क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, स्थान अनि आसनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यसमा मानसिक पक्ष सबल रूपमा जोडिएर आनन्द थपिन्छ।
भगांकुर चलाउनु वा यसको घर्षण नै महिला चरमसुखमा पुग्ने सायद सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यौन क्रियाकलाप हो। यो यस्तै ९० प्रतिशत महिलामा यौन संवेदनशीलताको केन्द्रका रूपमा रहेको हुन्छ। आफूलाई सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुराले यसलाई चलाउन सकिन्छ। आफूलाई मन पर्ने कुनै पनि तरिकाले यसलाई चलाउने सकिन्छ। चलाउने वा घर्षण गर्नेबाहेक दबाब दिने, विस्तार हल्लाउने वा जोडले हल्लाउने वा यसलाई कुनै वस्तुमाथि थिच्ने जस्ता अनेक उपाय गर्न सकिन्छ। पानीको हल्का फोहराको प्रयोगलाई पनि कतिपय महिला विशेष उत्तेजना प्रदान गर्ने कुराका रूपमा लिएका छन्।
योनिमा केही पसाएर यौन आनन्द प्राप्त गर्नु अर्को प्रमुख विधि हो। यसो गर्दा योनिमा पर्याप्त मात्रामा रस आइसकेको हुनुर्पछ र यौन उत्तेजना हुँदा यो स्वाभाविक रूपमै हुन्छ। यस्तो नभएको स्थितिमा अन्य कुनै चिप्लो पदार्थको प्रयोग गर्न बिर्सनु हुँदैन। यस्तो पसाउने कुरा सफा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। औंला पसाउँदा आफूलाई आनन्द पाउने स्थान योनिमा खोज्न सकिन्छ, जुन सामान्यता योनिको अगाडितिरको भित्तामा केही भित्र जघनास्थी (pubic bone) र पाठेघरको मुखको बीचतिर हुन्छ। यसरी हस्तमैथुन गर्दा केही महिलाले थप यौन उत्तेजनाका लागि स्तनलाई पनि प्रयोग गर्ने देखाएका छन्। भगांकुर होस् वा योनि, हस्तमैथुनमा औंलाको प्रयोग नै महत्वपूर्ण हुन्छ। औंला बहुउपयोगी हुने भएकाले नै चाहेअनुरूप दबाब, गति, तरिकामा गर्न सकिन्छ जसले आनन्द थप्छ नै। यीबाहेक महिला शरीरका अन्य अङ्गहरूको स्पर्श, मर्दन वा सुम्सुम्याइ यौन आनन्द पाउने कुरामा सहायक नै हुन्छन्, तर अचेल यसरी यौन आनन्द लिने क्रममा महिलाहरूले यौन प्रसाधन वा वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। कतिपयले पुरुषको लिङ्ग आकारको कृत्रिम वा प्राकृतिक वस्तु पनि प्रयोग गर्छन्। अंग्रेजीमा vibrators (भाइब्रेटर) भनिने यौन प्रसाधन विभिन्न आकार तथा प्रकारमा पाइन्छन्।
राति सुत्दा स्वप्नदोष हुनु राम्रो हो कि होइन ?
यौनसम्बन्धी कुरा सचेत मनमा मात्र होइन अरूबेला पनि निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ। निदाएको बेला लिङ्ग उत्तेजित हुनुका साथै यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएको सपना देखिन्छ। यही क्रममा कतिपय व्यक्तिले यौन चरमसुख पनि पाउँछन्। यसरी निदाएको बेला सपनामा यौन क्रियाकलापमा संलग्न भएर वीर्य स्खलन हुनुलाई नै स्वप्नदोष भनिन्छ। अंग्रेजीमा भने wet dreams, night fall वा nocturnal emmisions जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ।
सामान्यतः, प्रजनन प्रणालीले राम्रोसँग कार्य गर्न थालेपछि वीर्यको पनि उत्पादन हुन थाल्छ र यसले स्वाभाविक रूपमा बाहिर निस्कने बाटो खोज्छ। अर्कातिर यौन चाहना प्रबल हुन थालेपछि एक किसिमको यौन तनाव बढ्न थाल्छ, जसलाई शान्त पार्नु पनि स्वाभाविक नै हो। हस्तमैथुन वा यौन सम्पर्कबाट यस्तो अवसर मिल्न नसकेको स्थितिमा स्वप्नदोष भएर वीर्य स्खलन हुन पुग्छ। यौन तनावलाई शान्त पार्न तपाईंको प्रयास वा भनौं क्रियाकलाप पर्याप्त नभएको हुन सक्छ। तपाईंले हस्तमैथुन गर्न बन्द गर्नुभएकाले यौन तनाव कम गर्न प्रकृतिले नै मिलाइदिएको यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। प्रायःजसो पहिलो पटक यो किशोरावस्थामा हुन्छ र यसले यौन विकास राम्रैसँग भएको संकेत गर्छ। पीर मान्नुपर्ने कुरा छैन।